Ogige Ndị Ọchụnta Ọhụrụ nke Ndị Nwere Black Apple Apple na Ndị Mmepe | Esi m mac
Dị ka akụkụ nke nkwa Apple na-aga n'ihu iji nye obodo Black ikike ma wepụ ihe mgbochi iji nweta ohere nha anya, ogige ndị ọchụnta ego maka ndị isi ojii na ndị mmepe. Na mbipụta a na-emeghe, a nabatara ìgwè nke ụlọ ọrụ ngwa 13. N'ime mmemme agbụrụ na ikpe ziri ezi, Apple na-aga n'ihu n'ọrụ ya iji kwalite ma nweta nha anya nhatanha.
Na 2019, Apple nwere ụlọ nyocha imikpu nke mbụ ya. A raara ya nye ndi ulo oru ndi nwanyi hiwere na ndi mmepe. Ndị sonyere na mmemme enwetala nnukwu ego. Ha enwetakwala ọtụtụ onyinye na nkwanye ugwu ma ha emeela ka ndị otu ha na ndị ọrụ ngwa ọrụ gbasaa gburugburu ụwa.
Ezubere usoro ihe omume a iji nye ndị mmepe ohere iji ahụmịhe ọrụ ha dị na ọkwa ọzọ site na ịmara nka teknụzụ ọhụụ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ndị mmekọ Apple na Harlem Capital. Otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite New York nke na-etinye ego na ndị nrụpụta dị iche iche. Ebumnuche ya bụ inye ndị sonyere ya nduzi na ndụmọdụ.
Lisa Jackson, Onye isi oche Apple nke Gburugburu Ebe Obibi, Iwu na Social Initiatives, onye na-eduga REJI, ekwuputala:
Ndị a na-emepụta ngwa dị ịtụnanya na ndị isi azụmaahịa gosipụta mmụọ azụmaahịa nke na-abanye n'ime obodo ojii. Ọrụ ha na-egosiputa ikike nke nzuzo iji wuo ụwa ka mma, anyị na-asọpụrụ ịkwado ha ka ha na-agbanye ụzọ anyị maara na ọtụtụ ndị ọzọ ga-agbaso.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ izute ndị mmepe ga-abụ akụkụ nke mbipụta izizi a, ị ga-akwụsị site na gọọmentị peeji nke Apple mepụtara maka oge a. Dị ka anyị gwaworo gị, ha dị ngụkọta nke 13 họọrọ. Enwere ọtụtụ ọrụ na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ogige Ndị Ọchụnta Ọhụrụ nke Black Apple Founders na Ndị Mmepe
Ule nke ihe nhazi M1X dị omimi na-apụta